Ukuhlaziywa kwesithwebuli se-BQ Ciclop 3D ngemuva kweminyaka eyi-2 yethulwe | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Sihlaziya isithwebuli se-BQ CICLOP 3D
Ku I-CES konyaka 2015 bq yethulwe emphakathini wakhe isithwebuli se-bq CICLOP 3D. Kwakuwuphrojekthi womthombo ovulekile lapho inkampani yabelana ngayo nomphakathi wonke wabenzi umsebenzi odingekayo ekuthuthukiseni isithwebuli. Ngaleyo ndlela abasebenzisi bangabambisana emibonweni yabo nasekuthuthukisweni kwabo.
Kulesi sihloko Sizohlaziya ukuthi lo mkhiqizo ugugile kanjani futhi uma kusasebenziseka ukuthola imodeli enalezi zici.
1 Ubuchwepheshe busetshenziselwa ukuskena kwe-3D
2 Izici zesithwebuli se-BQ Ciclop 3D
3 Ithula, ihlanganisa futhi ifake isithwebuli se-BQ Ciclop 3D
5 Iskena sokuqala
Ubuchwepheshe busetshenziselwa ukuskena kwe-3D
ICiclop isithwebuli kususelwa kunxantathu we-3D okubandakanya i- ama-lasers aveza imigqa emibili entweni ejikelezayo kungxenyekazi ejikelezayo. Ikhamera ithwebula kokubili ukwakheka kanye nokwakheka kwento eskeniwe.
Into emnyama ithola ugongolo laser ukukhanya komugqa lokho ichezuka ngokubonisa futhi ibanjwa inzwa edlulisa isikhundla sephoyinti ngalinye lesigxobo esitholakele kwisoftware yokwakha kabusha futhi ilirekhode ku-database yayo kanye nokunye ukuze ikwazi ukwakha isithombe esiphelele se-3D. Lapho nje into ishintsha ukuma kwayo noma ukuma kwayo, ukukhanya kwesigameko akusakhanyi ngendlela efanayo, ngakho-ke akubhekiswa endaweni efanayo yekhamera ngakho-ke kunephuzu elehlukile elibhalisiwe kwimodeli ezoskenwa .
Ukuze ucubungule lonke ulwazi olutholakele ngekhamera futhi uphathe izinketho nemingcele yesithwebuli, bq usungule uHorus, i-multiplatform nesicelo samahhala.
Isithwebuli se-BQ Ciclop 3D siyakuvumela skena izinto kuze kufike kububanzi obungu-205mm ngo-205mm ububanzi kuya ku ukuxazulula kuze kube ngama-microns angama-500 ngesikhathi cishe semizuzu emi-5.
La electronics isithwebuli sakhiwe ngefayela le- Ibhodi elisekelwe e-Arduino, ikhamera yeLogitech, ama-lasers ama-linear ama-2 kanye ne-stepper motor.
Izici zesithwebuli se-BQ Ciclop 3D
Usayizi omkhulu wokuskena: 205mm (ubukhulu) x 205mm (ukuphakama).
Ukukhanya / Inzwa: Ikhamera yeLogitech C270 HD 1280 x 960
Isinqumo: Ama-microns angama-500
Ubukhulu beskena: (x) 450 x (y) 330 x (z) 230 mm
Skena indawo efiphele: (r) 205 x (h) 205 mm
Isisindo seskena: 2 kg cishe
Skena ngokunemba: ama-microns angama-500
Ijubane lokuskena: 3-4 min cishe.
Izinyathelo ngokujikeleza ngakunye: Phakathi kuka-1600 no-160
Kubukeka sengathi yize sekuphele iminyaka embalwa kwethulwe lo mkhiqizo, izinketho zokuthola idivayisi ngenani elifanele azikhuphukile futhi Ama-scanner wamanje wamanje anezici ezifanayo njengemodeli ye-bq.
Ithula, ihlanganisa futhi ifake isithwebuli se-BQ Ciclop 3D
El i-montage kakhulu elula futhi umenzi wayo ukulobe kahle kakhulu. Kuya ngokuthi ulilandela kangakanani ibhukwana kungathatha phakathi kwemizuzu engama-30 nehora ukuthi imishini ihlanganiswe ngokugcwele. Siyiqedile ngokushesha okukhulu, ngaphandle kokungabaza kunoma isiphi isinyathelo noma ukuhlehlisa noma iyiphi ingxenye ngenxa yokuhumusha kabi imanuwali.
Umenzi uthumele ngisho nevidiyo ku-youtube lapho nje imizuzu emi-3 ikhombisa ngokuningiliziwe ukuthi kufanele sizibeke kanjani zonke izingcezu.
Ngaphandle kokuthi imanyuwali yezilimi ezahlukahlukene ihlinzekwa ngomkhiqizo, sincoma ukuthi uhlole i- web portal Yini onayo ngemikhiqizo yakho?. Kuhlelo bashicilele konke okudingayo ukusebenzisa isithwebuli sakho. Kusuka kumanyuwali kuya kunguqulo yakamuva yesoftware kaHorus.
Sihlala sikuthola kuhlekisa lapho sithenga imikhiqizo enezingxenye eziphrintwe ngabaphrinta be-FDM. Endabeni yesithwebuli, zonke izingxenye zepulasitiki ziphrintiwe e-PLA. Kuyinkimbinkimbi ukuthi inkampani encane kufanele isebenzise lo mkhuba kodwa kunzima ngathi ukucabanga ukuthi le nqubo ingaba nenzuzo enkulu kunkampani efana ne-bq kunokwenza isikhunta somjovo. Noma kunjalo singakuqinisekisa lokho ikhwalithi yokuphrinta yalezi zingxenye ihle kakhulu.
Ngokusebenza okulungile kweskena udinga ukufaka isoftware kaHorus kanye namashayeli we-webcam weLogitech okufaka uhlelo, konke lokhu kungatholakala kwi-web portal yomkhiqizi
Lapho nje ibhuthi yokuqala yenziwe, sihlola ukuthi ifayela le- isoftware inesibopho sokubuyekeza i-firmware yebhodi le-arduino Okubandakanya. Uma sizenzele isithwebuli sethu singasebenzisa noma yiliphi ibhodi le-arduino ehlangabezana nemininingwane ebekiwe ngumkhiqizi. Imininingwane ebaluleke kakhulu yomsebenzi omuhle we-bq.
Sinezinto zonke ezihlanganisiwe futhi ezixhunywe kwi-PC, sekuyisikhathi sokufaka isoftware nokwenza ukuskena kwethu kokuqala.
Inkinga yokuqala esihlangabezane nayo ukuthi ukuba namakhamera e-web ahlukile axhunywe kwi-PC horus akakwazanga ukukhomba ngokuzenzakalela ukuthi iyiphi ezosetshenziswa futhi isoftware ayikwazi ukukhombisa ngokusobala ama-webcam ayitholayo. Emizameni embalwa sithole ikhamera yewebhu efanele, akukho lutho olubucayi.
Singaskena kuphela izindawo noma sithwebule umbala, sisebenzisa ama-lasers womabili noma eyodwa kuphela. Futhi kukhona izinketho ezingapheli esingazilungisa ukwengeza ukuskena kuzici zemvelo lapho senza khona ukuskena.
Ukuskena kwethu okokuqala kuyinhlekelele, ngakolunye uhlangothi enengqondo ngokuphelele, sethule ukuskena ngaphandle kokucabanga. Ukuvakashela izinkundla zabakhiqizi kusifundisa lokho uhlelo lwe-laser triangulation lubucayi kakhulu ukuthi indawo lapho kuhlangana khona ama-lasers ama-2 iqondaniswe kahle maphakathi ne-turntable. Kodwa-ke, i-BQ ikushaye indiva okuthile okulula njengokumaka isikhungo sale ndawo yesikhulumi. Isikwele, ikhampasi, iphepha, ipeni nenkinga ixazululiwe. Lapho ama-lasers esekaliwe, ikhwalithi yezinto eziskeniwe selithuthuke kakhulu.
Lapho siskena into sithola i-mesh yamaphoyinti esingakwazi ukuwagcina ngefomethi ye-.ply kepha leli fayela alikwazi ukusetshenziswa kunoma iyiphi iphrinta ngoba ifomethi ejwayelekile iyi-.stl. Okunye ukuvakashela iwebhusayithi yomkhiqizi kucacisa ukuthi Isoftware ye-horus ayikhiqizi amafayela we-.stl ukufeza le fomethi kufanele sisebenzise olunye uhlelo lomthombo ovulekile.
Ukuba nokusebenzisa isoftware yesibili ukufeza umphumela oyifunayo kwenza ulwazi lokusebenzisa isithwebuli lube yindilinga engaphansi. Noma kunjalo i-bq ibhale phansi zonke izinyathelo ezidingekayo ukuqedela umsebenzi.
Emfanekisweni singabona imodeli eskeniwe nesithombe se-3D esitholakele
Ngokubheka izivivinyo ezenziwe, singakuqinisekisa lokho imiphumela izohluka kakhulu ngokuya ngenani elikhulu lokuguquguqukayo. Kusukela ekukhanyeni kwendawo lapho sine-scanner khona, ukunemba kokulinganiswa esikwenzile noma ngisho nemibala efakwe into eskeniwe.
Enye yezinto ezithuthukisiwe ezinconywe ngumenzi skena into izikhathi eziningana ngezindlela ezihlukene ukuze inetha lamaphoyinti linenani elincane lezindawo ukukhanya kwezibani ze-laser ezingakwazanga ukufinyelela kuzo.
Yize le mishini ibisemakethe iminyaka emi-2 futhi Ayitholakali kuwebhusayithi yomkhiqizi uqobo, sisengayithola kwezinye izikhungo ze- Intengo elinganiselwa ku- € 250.
Ukuskena kokuma kwe-3D kuyinqubo eyinkimbinkimbi okwenzelwe ngayo amasu amaningi nemishini ebiza izinkulungwane zama-euro. Kufanele sicabange ukuthi ukulinganiselwa sizoba yini nganoma iyiphi impahla yasendlini.
Leli qembu line- isilinganiso esihle kakhulu sekhwalithi / sentengo futhi 2 iminyaka ngemuva kokwethulwa kwayo emakethe ayiphelelwe yisikhathi. Izindlela ezihlinzekwe ngumkhiqizi zenza lula isipiliyoni somsebenzisi ngangokunokwenzeka.
Sithole imiphumela ehluke kakhulu phakathi kwezinto ezahlukahlukene esiziskene, kepha ngokubekezela singathola amafomu athembeke kakhulu kokwangempela.
Kungumkhiqizo ofanele kulabo abenzi abathanda ukuphrinta kwe-3D abajabulela yonke inqubo yokudala futhi abalindeli imiphumela ephelele kusukela kumzuzu wokuqala.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Ukuphrinta kwe-3D » Sihlaziya isithwebuli se-BQ CICLOP 3D
UJoel Ontuña kusho
I-athikili ethokozisayo mngani, ngenza ucwaningo ngezikena ezikhona ze-3D emakethe, ungangisiza ngolwazi oluthile mayelana nenkampani i-BQ
Phendula uJoel Ontuña
kwenza Isonto eli-1
Sawubona, ngine-scanner kodwa angikwazi ukuthola isofthiwe ye-horus 3d, ingangisiza uma unayo ngoba ayitholakali naku-github.
Ngihlala ngibhekile kunoma yikuphi ukukhathazeka.
U-Sculpteo usikhombisa ibhayisikili lakhe eliphrintiwe le-3D
I-DV WING, idrone ekhethekile yezolimo ngokunemba